မန်ယူ v မန်စီးတီး၊ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မှတ်ချက်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ် အံ့အားသင့်နေတဲ့ ဂွာဒီယိုလာ | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
မန်ယူ v မန်စီးတီး၊ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မှတ်ချက်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ် အံ့အားသင့်နေတဲ့ ဂွာဒီယိုလာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ စီးတီးကစားသမားတွေဟာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖျက်ထုတ်မှုပြုလုပ်လာဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ မန်ယူကစားသမားတွေကို ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ဒါဘီအကြို သတိပေးပြောဆိုမှုအပေါ် မန်ချက်စတာတီးနည်းပြ ပက် ဂွာဒီယိုလာက အံ့သြနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းက ဆိုးလ်ရှားက "ဒါဘီပွဲမှာ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်းမှုတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ မင်းတို့ရဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ကို လျှပ်တစ်ပြတ် ကန်လိုက်တာမျိုး ပြုလုပ်လာပါလိမ့်။"လို့ ဆိုပါတယ်။
"သူက ဒီလိုမျိုး ပြောခဲ့တာလား? ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု ၆၅၊ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကျနော်တို့ ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာတဲ့လဲ?"လို့ ဂွာဒီယိုလာက ပြောပါတယ်။
"ကျနော် ဒီလို လူချကစားတာကို မကြိုက်ပါဘူး။ ကျနော့်အသင်းကလည်း ဒီလိုကစားဖို့ ဖွဲ့စည်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။"
ဂွာဒီယိုလာက တန်ပြန်တိုက်စစ်အသုံးပြုတဲ့ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဥပဒေပြင်ပကနေ ကျူးလွန်းဖို့ သူ့အသင်းကို ပြောပြထားတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ယခင်က ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။
Opta ရဲ့ အချက်အလက်အရ ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ မန်ယူအသင်းဟာ မန်စီးတီးအသင်းထက် ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ကွင်းတစ်ခြမ်းမှာ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တဲ့ အကြိမ်ရေပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ဖရီးကစ်ပြစ်ဒဏ်ဘော ၁၉၅ ကြိမ်ပေးခံရပြီး စီးတီး ၁၇၀ ကြိမ်သာ ပေးခံရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စီးတီးက အဝါက ၃၈ ကြိမ်နဲ့ အနီကတ် ၁ ကြိမ်ပြသခံရပြီး ယူနိုက်တက်ကတော့ အဝါကတ် ၆၄ ကြိမ်နဲ့ အနီကတ် ၄ ကြိမ်အထိ ရရှိထားပါတယ်။
"နည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၁၀ ရာသီကိုင်တွယ်ခဲ့ရာမှာ ဒီလိုကစားဖို့ ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားတဲ့အပြင် ပွဲတစ်ပွဲအတွက် ဒီလိုမျိုး ဘယ်တော့မှ မပြင်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။"လို့ ဂွာဒီယိုလာက အခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
"တစ်ခါတစ်လေ ဘောလုံးမှာက ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်မှုတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အရမ်းမြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ပြိုင်ဘက်ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မပြောဖူးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီပွဲပြီးတဲ့အခါ သူ့ကို (ဆိုးလ်ရှား)သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ခင်ဗျား မေးနိုင်ပါတယ်။"
လီဗာပူးလ်ကို မန်စီးတီး လိုက်မီနိုင်မလားဆိုတာ မှော်ဆရာမဟုတ်လို့...
ဗီလာနဲ့ပွဲက မန်စီးတီးရဲ့ ပထမပိုင်းခြေစွမ်းအတိုင်းဆိုရင် ချန်...
Pep GuardiolaOle Gunnar SolskjaerSolskjaerManchester Derby